‘प्रलोभनमा पारेर ममाथि बलात्कार भएकै हो’, उनले भक्कानिदै भनिन्– ‘न्याय पाइनँ’ « Globe Nepal
नेपालमा कर्पोरेट बलात्कारका घटनाहरु सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक हुँदा उनी बिगतमा फर्किन्छिन् र पीडा महसुस गर्छिन् । गीता भन्छिन्, ‘मैले पीडा भोगेको बेला पीडकलाई सजाय दिनसकेको भए वर्तमानमा धेरै महिलाहरुले सतित्व लुटाउनु पर्दैन थियो ।’
महिला अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियान्ता गीता पोखरेलले आफू बलात्कृत भएर न्याय नपाएको बताएकी छन् । आफूलाई विवाहको प्रलोभन देखाएर नर्भिक अस्पतालका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. जयप्रकाश जयसवालले बलात्कार गरेको उनको आरोप छ ।
‘साथीभाइमार्फत् एक पुरुष चिनजान गर्न आइपुगे । केही दिनमै प्रेम प्रस्ताव गरे । तत्काल स्वीकार गर्ने कुरो भएन, डाक्टरकै सर्टिफिकेट देखाए । उज्जवल भविष्यको सपना देखाउन थाले । होला भनेर उनलाई विश्वास गर्न थालें । भेटघाट बाक्लियो, शारीरिक सम्बन्ध राखें, त्यसपछि मिसन पूरा भएको आभास दिन थाले । पछि म आफै टाढिएँ, तर तिनै डाक्टरको भ्रुण मेरो पेटमा विकसित हुँदै गएको डेढ महिनापछि थाहा भयो’ महिला अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियान्ता गीता पोखरेलले भनिन्, ‘त्यसपछि मेरा दुःखका दिन सुरु भए । अध्ययनसँगै छोरी हुर्काउनु, समाजसँग लड्नु र न्यायका लागि भौतारिनु मेरो दैनिकी बन्यो ।’
गीता यतिबेला बेलायतमा बसोबास गर्छिन् । धनसम्पत्ति र मायाको अब उनलाई कुनै अभाव छैन । तर विगत सम्झेपछि उनलाई पीडाबोध हुन्छ, भक्कानो फुट्छ र ती पीडालाई अक्षरमा लिपिबद्ध गर्न पुग्छिन् । नेपालमा कर्पोरेट बलात्कारका घटनाहरु सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक हुँदा उनी बिगतमा फर्किन्छिन् र पीडा महसुस गर्छिन् । गीता भन्छिन्, ‘मैले पीडा भोगेको बेला पीडकलाई सजाय दिनसकेको भए वर्तमानमा धेरै महिलाहरुले सतित्व लुटाउनु पर्दैन थियो ।’
न्याय निरुपण हुन नपाउँदै उनलाई अदालतमै सम्झौंता गर्न बाध्य बनाइएको थियो । के हो वास्तविकता ? छोटो समयमा कसरी गीता बेलायतमा सुविधासम्पन्न जीवन बिताउन पुगिन् । नेपालमा अहिले फेरि बलात्कारको विषय चर्किरहेको छ । फेरि गीतालाई पनि त्यही पुरानो घटनाले पिरोलिरहेको छ– ‘मैले न्याय कहिले पाउँछु ?’ प्रश्नको उत्तर खोज्न उनी सामाजिक सञ्जालहरुमा पोखिन्छिन् । तर उनले न्यायको अनुभूति गर्न सकिरहेकी छैनन् । यिनै विषय समेटेर गीतासँग ग्लोब नेपालले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
० सामाजिक सञ्जालमा तपाईंले नै पोष्ट गरेको पुरानो घटना धेरैले शेयर गरेको देखियो, अहिले फेरि किन ल्याउनुभयो ?
-मैले अहिले मात्र ल्याएको हैन । पहिलेदेखि मैले विभिन्न माध्यमहरुबाट म माथी भएको बलात्कारकोबारेमा बोलिरहेकी छुँ । लेख रचनाहरुमा पनि मैले न्याय नपाएको पीडा पोखिरहेकी थिएँ । तर, जबजब नेपालमा यस्ता घटनाहरुको चर्चा हुन्छ फेरि मलाई म माथीको त्यो घटनाले पिरोल्छ अनि फेरि म बोल्छु । अहिले पनि त्यस्तै भएको हो ।
० तपाईंको विषय त अदालतबाट टुंगिसकेको हैन र ? फेरि बलात्कारसँग जोड्नु न्यायोचित हुन्छ ?
– त्यो बेला बलात्कार भएको महसुस हुँदा पनि ३५ दिनको हदम्यादको कानुन थियो । अहिले कानुन संशोधित भएर एक वर्षको बनेको छ । मैले ९ वर्ष पीडा भोगें, र पनि न्याय पाइनँ । दोस्रो कुरा त्यो बेला गर्भपतनको विकल्प थिएन, तर त्यो मेरो इच्छा होइन । सबैको विषयमा बोल्नुपर्दा गर्भपतनका बारेमा पनि विकल्प राखिनुपथ्र्यो, त्यो कानुन पनि परिवर्तन भएर आयो ।
त्यो घटनाबाट मैले न्याय पाएकी छैन, म पीडित हुँ । म कति पीडित हुने, म जस्ता अरु कति महिला पीडित हुने ? पीडितले आवाज उठाउन पाउने कि नपाउने ? यो विषयमा म बोल्दा कानुनी हिसाबमा न्याय पाइसकेकी रहेछ, तैंले बोल्न पाउँदैनस् भनेर समाजले कति चोटी औंला उठाइराख्ने ?
मैले जन्माएको बच्चाको समान व्यवहार खोइ ? किन कानुनले त्यस्ता बेभिचारीको हात बाँध्न सक्दैन, किन छौंडाझै छोडिन्छ ? मलाई यो समाजले किन न्याय दिदैन ? यी हुन् मेरा प्रश्न ।
० न्यायका लागि अदालत जानुहुन्छ ?
– जाँदिनँ, मैले पुनः मुद्दा हाल्न लागेको पनि होइन । यतिबेला म मुद्दा हाल्ने ठाउँमा पनि छैन । तर, न्याय खोजिरहेकी छु ।
० फेरि न्याय भएन भन्नुहुन्छ ?
– मलाई समाजले न्याय दिनुपर्छ ।
० न्यायका लागि त अदालत जानुपर्ने होइन र ?
– तत्कालीन अवस्थामा मेरो व्यवहारिक कारणले गर्दा अदालतमा मिलापत्र भएको हो । कानुन व्यवसायी र न्यायधीशकै सल्लाहमा मैले अदालतमा मिलापत्र गरेकी हुँ । मलाई कानुन त्यत्ति धेरै थाहा छैन, म अन्यायमा परेकी मान्छे हुँ, कानुनविद् होइन ।
० न्याय महसुस नभइ किन मिलापत्र गर्नुभयो ?
– केस मिलापत्र गरेकी हुँ, मैले न्यायभन्दा पनि बच्चाको भविष्यबारे सोचेँ । मिलापत्रमा मेरो बच्चा नै होइन भनेपछि डिएनएसम्म केस पुगेको हो । डिएनए मिलेपछि केस स्वीकार गरिएको हो । एउटा बाबुले डिएनएसम्म केस पु-याउन सक्छ ? डाक्टरजस्तो मान्छेको नैतिक जिम्मेवारी हुँदैन ?
म जस्ताकाे स्वत विवाह हुने कानुन बदलिनुपर्छ । महिलाहरुलाई आफ्नो पहिचान चाहिन्छ । बलात्कारीको पूर्व श्रीमति भएर कसैले बाँच्न नपरोस् । हिजो मेरी छोरीले पनि भनी– ‘मेरो नागरिकताबाट बावुको नाम झिकिदेऊ, बावुको नाम नभएको नागरिकता मलाई देउ’ तर म यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यसले मलाई कति पिडा दिएको होला ? त्यो तपाईँले अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्न ।
० मिलापत्र गर्न किन बाध्य हुनुभयो, भन्न मिल्छ ?
– मैले दुःखका कुरा यसअघि नै भनिसकेकी छु । मेरी छोरी आठ वर्षकी भइसकेकी थिइन्, नागरिकता चाहिने बेला भइसकेको थियो । स्कुलले कक्षा ८ मा जन्मदर्ता खोज्छ । जन्मदर्ता नै रोकिएको थियो । अदालतको प्रकृया छिटो सक्न पाए, मेरी नानीको रोकिएको काम अघि बढ्थ्यो भन्ने लाग्यो । मेरो मात्र केस होइन, उसलाई पनि मैले सम्हाल्नुपथ्र्यो । छोरीको नागरिकताका लागि मैले मिलापत्र गरेकी हुँ । अंश मैले छोड्ने कुरा भएन । अंश केही लुकाइएका थिए, त्यसमा विवादै छैन, म पैसा कम भयो भन्दिनँ । मलाई न्यायको अनुभूति हुन्छ भने म त्यो पैसा अहिले फिर्ता गर्छु ।
० पीडक जेल जाँदा न्यायको अनुभूति हुन्छ ?
– विवाहको प्रलोभन देखाएर म माथि बलात्कार भएकै हो । पीडक जेल जाँदा मात्र मलाई न्यायको अनुभूति हुन्छ भनेकी छैन । मूल कुरा पीडकले गल्ती महसुस गर्नैपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यो बेला पीडकलाई कारबाही भएको भए अहिलेसम्म धेरै महिलाहरुले व्यभिचारीहरुबाट अस्मिता लुटाउनु पर्ने थिएन ।
० तपाईंलाई कसरी प्रलोभनमा पारे भन्न मिल्छ ?
– साथीहरुमार्फत् भेट भयो, उसले प्रेम प्रस्ताव राख्यो । सुरुमा मैले स्वीकार गरिन्, तर उसले निक्कै फकायो । सर्टिफिकेट नै देखाएर म डाक्टरजस्तो मान्छे त्यस्तो गलत नसम्झ भनेर कन्भिन्स गर्यो । म विस्तारै कन्भिन्स हुँदै गएँ, हाम्रो भेटघाट बाक्लिदै गयो । भेटघाट बाक्लो भएसँगै हाम्रो शारीरिक सम्बन्ध भयो । शारीरिक सम्बन्धपछि मलाई प्रेमको नाटक गरेको आभास भयो । त्यसपछि म टाँढिन थाले । अन्ततः मैले उसलाई छाडें । उबाट म टाढा बस्न थालेँ । टाढा बसेको एक डेढ महिनापछि म गर्भवती भएको थाहा पाएँ । थाहा पाइसकेपछि फेरि म उसको सम्पर्कमा पुगें । त्यसपछि उसले एर्भसन गर्नुपर्छ भन्यो । एर्भसन गर्न म तयार थिइनँ । एबर्सन गरेको भए म कानुनको नजरमा अपराधी हुन्थे, त्यसपछि बाबु पुष्टि गर्ने आधार पनि नष्ट हुन्थ्यो ।
प्रमाण जुट्छ कि भनेर म डाक्टरकहाँ गएँ । दुईवटा डाक्टरकहाँ पुगेँ, फलानो मेरो बच्चाको बाउ भन्दा ती डाक्टर अच्चमित भए । एभर्सनका लागि दुईपटक म डाक्टरकहाँ गएको हो । तर मेरो इच्छा एभर्सन थिएन ।
० त्यसपछिका दिन ?
– एभर्सन नभएपछि ऊ भाग्यो । कहाँ पुग्यो थाहा भएन । बच्चा पेटमा विस्तारै बढ्दै गयो । माइतीको संरक्षणमा बसें । न्यायका लागि महिला आयोगमा पुगें, दुर्गा पोखरेलसँग भेट भयो । उहाँले नै बच्चा पेटमा हुँदा आश्रय दिने मान्छे खोजिदिनुभयो । बाहिरै बसेर बच्चा जन्माएँ ।
त्यो बेला पीडकलाई कारबाही भएको भए अहिलेसम्म धेरै महिलाहरुले व्यभिचारीहरुबाट अस्मिता लुटाउनु पर्ने थिएन ।
० दाजुभाइबाट पनि अपहेलना भएको हो ?
– दाजुभाइ मात्र नभएर समाजले नै मलाई टर्चर दिएको थियो ।
० यी दुःखी घटनासँग जीवनको गोरेटोले कसरी मोड लियो ?
– जर्बजस्ती लतारिनुपर्ने जीवन चल्दै थियो । स्कुलमा शुल्क बुझाउन नसक्दा कुटाइ खाएर शरीरभरि नीलडाम लिएर मेरो बच्चा घर आएको घटना अहिले पनि मेरो मानसपटलमा ताजै छ । जागीर खाँदै, पढ्दै छोरी पढाउँदै गरें । भाग्यवस् जागीर राम्रो ठाउँमा पाएँ । बच्चालाई पनि राम्रोसँग पढाउन सकें । हामी आमा छोरी एकअर्कामा खुशी थियौं, तर समाजबाट टाढा भयौं ।
० यूरोपसम्मको यात्रा चाँही कसरी सम्भव भयो ?
– ठ्याक्कै तिथिमिति चाहिँ थाहा छैन । कोभिडभन्दा अगाडि ७–८ महिना पहिले नै मेरो जागीर ब्रेक भएको थियो । दाजुले साथीको ट्राभल कम्पनीमा काम गर्छौ ? भनेर सोध्नुभयो । अलिकति धेरै पैसा कमाउने भइसकेको थिएँ, थोरै पैसा हो भने म काम गर्न जान्नँ भनें । ‘३ महिना मात्रै भएपनि मेरा लागि गर्देउ’ दाजुले भन्नुभयो । नकार्न नसकेर मैले ३ महिनाका लागि काम गर्न थालेँ ।
दुई महिनासम्म मलाई कामै दिएनन् । एकदमै अल्छी लाग्यो, फ्रस्टेशन नै भयो । तेस्रो महिना उनीहरुको टुरिस्टहरु आउने रहेछन् । १२ जनाको टुरिस्ट ग्रुप थियो । घुमाउन लिएर गएँ । चिया खाने ठाउँमा सबै आ–आफ्नो पार्टनरसँग चिया खान थाले । एकजना चाहिँ टोलाइराखेको देखें । तपाईंको बुढी खोइ ? भनेर सोधें । मैले विवाह नै गरेको छैन भन्ने जवाफ पाएँ । किन नगरेको भनेर सोधें, बिजनेस गर्दागर्दै भ्याइन, अब विवाह गर्ने इच्छा पनि छैन उमेर पनि छैन भन्नुभयो । मेरो काकाले ६० वर्षमा विवाह गर्नुभएको उदाहरण दिएँ । एक्लो जीवन जिउन हुँदैन, कुराकानी सेयर गर्ने मान्छे चाहिन्छ भनेँ ।
यति कुरा भनेपछि उहाँ मसँग नजिक हुनुभयो । पोखरा जाँदा मैले उहाँको केयर गर्नुपर्ने, उहाँले मेरो बढी केयर गर्न थाल्नुभयो । चितवन जाँदा पनि उहाँको व्यवहार त्यस्तै रह्यो । पछि फर्केर आउँदा मलाई ल्यापटप उपहार दिनुभयो । यद्यपि मेरो अफिसबाट महँगो उपहार लिन पाइँदैन थियो ।
हामी सम्पर्कमै थियौं । उहाँले मेरो देश हेर्न आउ भन्नुभयो । तपाईंले स्पोन्सर गर्दैमा तपाईंको देशले मलाई त्यत्ति सजिलै आउन दिँदैन भनँे । तपाईं पनि एक्लै हुनुहुन्छ, म पनि एक्लै हो, विवाहका लागि सोच्नु हुन्छ भने म तयार छु भनेँ । विवाहसम्बन्धी नेपालको वस्तुस्थिति पनि उहाँलाई बुझाएँ । उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र हामीले गएको डिसेम्बरमा विवाह गरेका हौं ।
० श्रीमानलाई पुराना कुरा सुनाउँदा तपाईंलाई अप्ठ्यारो पर्दैन ?
– मैले कल्पनै नगरेको संसारमा आइपुगें । यहाँका मान्छेहरु एकदमै बुझ्ने हुँदा रहेछन् । यो कुरा लिएर अब हिड्नु हुँदैन, तिमीलाई अब केही अभाव हुँदैन भन्नु हुन्छ । म काम गर्न पनि जान्न । म हाउसवाइफ हो । बेलायतमा हाउसवाइफ भएर बस्ने मान्छे एकदमै भाग्यमानी मानिदो रहेछ । त्यो भाग्यमानी मध्येको म पनि एक हुँ । मलाई अहिले पैसा, धनसम्पत्ति र मायाको खाँचो छैन ।
तर, ती पुराना कुराले मलाई पीडा दिँदा लेखिराख्न मन लाग्छ । नेपालमा यस्ता बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुँदा आफैलाई पीडा भएको महसुस हुन्छ । पल काण्ड आयो, त्यसपछि सुन्दरी प्रतियोगितामा बलात्कार काण्ड आयो । यी काण्ड आएपछि त मलाई न्याय प्राप्त भएको छैन भनेर टुईट गरें । डा. बाबुराम भट्टराईलगायत धेरैबाट रिटुईट प्राप्त भयो ।
यस्ता कुरा राख्दा मलाई कारबाही हुन्छ होला । तर मैले यस्ता कुरा राख्नुपर्छ भनेर यी विगतका कुरा सार्वजनिक गर्ने आँट गरेकी हुँ ।
० पल काण्डपछि यस्ता घटना सार्वजनिक गर्ने आँट आएको हो ?
– मलाई मेरो विगत बाहिर ल्याउन आँट आएको होइन, पल काण्डमा पीडितलाई ऊर्जा थप्ने काम गरेकी हुँ । म पनि यो फेजबाट गुज्रिएको हो, त्यो फेजबाट गुज्रिए पनि हिम्मत हारिएन, पछि हटिएन भने पूर्ण न्याय नपाए पनि यतिसम्म हुनसक्छ भनेर बाटो देखाइदिएकी हुँ ।
० यति धेरै संघर्ष गर्नुभयो, महिलालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
– सबैभन्दा पहिला शिक्षा चाहिन्छ । शिक्षाले मलाई धेरै कुरामा सहयोग पुगेको छ । आत्मनिर्भर हुन रोजगार बन्नुपर्छ । महिलाको रोजगारका लागि सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मैले लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता फेस गरेर जागीर खाएकी हुँ । मजस्तै सबै महिला सक्षम हुँदैनन् । यति भन्छु, पढाई चाहिँ जसरी भए पनि पूरा गर्नुपर्छ । यसले अन्यायबिरुद्ध लड्न साहस दिन्छ ।